Pixelmator Pro maka Mac ọzọ na ọkara ọnụahịa ahụ ma kwe nkwa ịkwalite ọrụ ịkụ mkpụrụ ya | Esi m mac
Pixelmator Pro maka Mac ọzọ na ọkara ọnụahịa ahụ ma kwe nkwa ịkwalite ọrụ ịkụ mkpụrụ ya
Ikekwe ike kachasị ike nke Photoshop ugbu a bụ Pixelmator Pro. Anyị nwere ike ịsị na ha na-egwuri egwu n'otu otu egwuregwu ahụ, ma dakọtara na M1 ma ha abụọ nwere igwe nrụzi dị ike. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na onye nke mbụ nwere ahụmịhe karịa na ọ doro anya na ọ ka mma, anyị enweghị ike ileda uru nke Pixelmator anya nke na-ahapụkwa anyị mmemme ya ugbu a Ọkara ọnụahịa na nzọ iji meziwanye ngwa ọrụ ịkụcha ama ya
Site n'oge ruo n'oge ndị mmepe nke Pixelmator Pro maka Mac na-eju anyị anya na ụfọdụ uru dị na atụmatụ mmemme ahụ ma ọ bụ na ọnụahịa ahụ. N'oge a, anyị nwere ike ikwu nke ahụ anyị na-ekwu maka ha abụọ. Anyị nwere mbelata na ọnụahịa yana nkwa site na ụlọ ọrụ na-ekwu na n'oge na-adịghị anya anyị ga-enwe ọrụ ọhụụ nke ga-eme ka mmemme a kawanye mma.
Ọ bụghị nke mbụ oge anyị nwere mbelata na ọnụahịa na ọkara, dị ka oge a. Yabụ ugbu a ọ bụrụ na ị kpebie ịzụta mmemme ahụ ọ ga-efu gị euro 21, 99, kama ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 44 ọ na-efu kwa mgbe.
Mana anyị ga-ekwukwa na ụdị usoro ihe omume na-esote, 2.1 anyị ga-enwe ihe ọhụụ dị mkpa n'ihe gbasara ngwa mkpagide nke Ngwaọrụ Igwe ji arụ ọrụ. Ọrụ ọhụrụ a ga - enyocha ihe mejupụtara nke foto site na iji igwe na - amụ algorithm ma nye echiche nke otu ọ ga - esi kpoo foto iji mee ka o nwekwuo anya. Ya mere, ọ dịkarịa ala, a kọwara ya gị blog post.
«Karịsịa, anyị chọrọ ọrụ a bụrụ ihe ọchị"Ndị mmepe ahụ na-ekwu, na-agbakwunye na ngwa ahụ" na-enye echiche dị iche iche maka ọrụ ntinye foto na-arụkarị. " Ha abụghị ihe ọhụrụ na mpaghara ndị a dịka Pixelmator Pro ugbua gụnyere igwe mmụta igwe dị ka Mkpebi siri ike, nke ahụ na-ebuwanye ibu onyogho na-enweghị ịkọ nkọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Mac App Store » Pixelmator Pro maka Mac ọzọ na ọkara ọnụahịa ahụ ma kwe nkwa ịkwalite ọrụ ịkụ mkpụrụ ya
AirPods 3 na Apple Music Hi-Fi na Tuesday, May 18?
Apple TV + na-ejide ikike maka ihe nkiri The Macbeth Tragedy na Denzel Washington